Bruno Fernandes Oo Shaaca Ka Qaaday In Edinson Cavani Uu U Sheegay Halka Uu Ku Toosinayo Laadkiisa Xorta Ahaa
HomeWararka Ciyaaraha MaantaBruno Fernandes oo shaaca ka qaaday in Edinson Cavani uu u sheegay halka uu ku toosinayo laadkiisa xorta ahaa
Bruno Fernandes ayaa shaaca ka qaaday in Edinson Cavani uu u sheegay halka uu ku toosinayo laadkiisa xorta ah kulankii ay Man United guusha 3/2 ah ka gaadhay Liverpool.
United ayaa ku garaacday FA Cup wareega afaraad kooxda ay xafiiltamaan iyadoo uga mahadcelineysa laadkii xorta ahaa ee Fernandes, ka dib goolal hore oo ay u kala dhaliyeen Mason Greenwood iyo Marcus Rashford.
Ole Gunnar Solskjaer ayaa kursiga keydka ku soo bilaabay Fernandes, laakiin xiddiga reer Portugal ee saameynta leh ayaa soo galay qeybtii labaad si uu guul ugu horseedo United.
Wuxuu la hadlay BBC-da kadib: “Muhiimadda ugu weyn waxay ahayd inaan aado wareega xiga, dhib malahan cida dhalisa. Dabcan hadaan dhaliyo, waan faraxsanahay, tani waa hubaal.
Waxaan in badan ka shaqeeyaa, laadadka xorta ah,. Edi Cavani ayaa ii sheegay qaabka iyo dhinaca aan u tuuri lahaa Dabcan waan u tuuray waana dhaliyay.